Exclusive: Xasan oo beddelaya agaasimayaashii VILLA Somalia (Ceeb ka tagaan madaxtooyada)!! - Caasimada Online
Home Warar Exclusive: Xasan oo beddelaya agaasimayaashii VILLA Somalia (Ceeb ka tagaan madaxtooyada)!!
Exclusive: Xasan oo beddelaya agaasimayaashii VILLA Somalia (Ceeb ka tagaan madaxtooyada)!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu is-beddel ku sameeyo qaar ka mid ah agaasimayaasha tirada badan ee Villa Somalia kadib markii xafiiska madaxweynuhu noqday mid aan wax qabad muuqda lahayn.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in xubnaha xilka laga qaadi doono uu ka mid yahya madaxa shaqaalaha Villa Somalia (Chief of Staff) oo lagu magacaabo Cali Cumar oo loo yaqaan Cali Balcad.
Cali Balcad ayaa sida la sheegay noqday nin fadhiid ah oo aan waxba qaban, islamarkaana iskahorkeena madaxweynaha iyo xubnaha kale ee ku dhow, sida xubno ku sugan Villa Somalia ay u sheegeen Caasimada Online.